Kedu ka m ga esi edozi mbugharị exe bad image? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Userinit.exe bad image - otu esi edozi
Userinit.exe bad image - otu esi edozi
Kedu ka m ga esi edozi mbugharị exe bad image?
IjindoziiheỌjọọ Ọjọọnjehie na Windows 10, lee ọtụtụ ụzọ iji rụọ ọrụ.
Tinyegharịa usoro ihe omume ahụ enweghị ike imeghe.
Wepu nsogbu Windows nwere nsogbu.
Gbaa a System File Checker ịlele rụrụ arụ usoro faịlụ.
Gbaa Windows Automatic Mmezi.
Mee usoro weghachite.
Ndewo onye ọ bụla ya mere, ebe a bụ oghere 202 m nọ ebe a iji gosi gị ozi m na-ezighi ezi nke m natara n'ụtụtụ a, ọ ga-abụ na mụ na Vindictus na-egwuri egwu ogologo oge na laptọọpụ m nwụrụ na m mana atụfuru m ọzọ m nwetara ozi njehie a na-ejide onbad image njehie Windows 7 Enwetara m ozi na ahapụ m ka m nye nke abụọ, ọ dị mma na m ga-abanye dị ka nke a ka m wee mata ihe mere, mana mgbe m nwara ọzọ ruo ogologo oge, anọgidere m na-enweta ozi a nke kwuru windo m bụ ndị iwu na-akwadoghị ma ọ bụ nwee njehie ma enwere m ezigbo iwe n'ihi na m na-apụta oge ọ bụla m banyere ma ọ bụ oge ọ bụla m pịrị na ngwa ahụ dịka otu n'ime ndị a ọ na-ewute m kama kama ịkwa ákwá n'ihu onwe m ma na-ebe ákwá nkuku ma obu na acho enyemaka dika ndi ozo g’eme, m doziri ya a na m egwu egwu o putara na m doziri ya mana emeghi m ihe ndi ozo mana a biara m igosi gi umu aka otu m siri dozie ya na odi mfe na ngwa ngwa Ihe ngwọta iji dozie nke ahụ na ọ na-ewe nkeji ise ebe a anyị ga-aga m mechie nke a ma gosi gị gu ys how to stop, dịkwa mma na na, e nwere n'ezie atọ ụzọ dị iche iche idozi a njehie ozi na tufuo ya, ma m na-dị nnọọ na-aga na-egosi gị otu ihe taa na ma eleghị anya, ijide n'aka otú ime ya - Aga m ihichapụ ya ụbọchị ọzọ, mana dịka ọ dị ugbu a, m ga-egosi na ntorobịa bụ ụzọ kachasị mfe iji pịa bọtịnụ a, mana ọ dị mfe ma ọ bụrụ na ị pịa aka nri ọ bụla na ihuenyo Achọrọ m ịga ntọala ntọala dị elu, pịa ya ma ị ga-aga taabụ nke anọ akpọrọ Nchedo sistemụ ma ọ ga-abụ sụgharịrị sistemụ, ọ dị mma, ma mgbe ahụ ị ga-anọ na folda ahụ m chọrọ ịga ma ọ bụrụ na ị weghachite faịlụ sistemụ ma ọ bụ ntọala gị tupu ị hụ Ihuenyo a ma ọlị, kama ị na-ahụ ihuenyo dị ka nke a họrọ ebe dị iche iche eweghachi ma ọ bụrụ na ị nwere ozi njehie ahụ, ịchọrọ ịlaghachi na otu n'ime isi ihe ikpeazụ na oge ebe url gị ma ọ bụ ozi a egosighi elu ma ịchọrọ iweghachi okwu ahụ, dị ka m, um, m nwetara ya site na abalị a ma ọ bụ na m na-ekwu n'ụtụtụ a, ya mere m ahazi FinalF antasy 11 na ọ bụ ya mere o ji dị ugbu a ebe a, yabụ nke bụ ihe sistemụ weghachi na-eme, ọ dị ka egwuregwu areal, ọ bụ ihe niile, ọ bụrụ na ị bụ ezigbo ihe atụ, dịka ị nọ n'ọnọdụ dị mma ịchekwa ma ị chọta Onye isi onye ị natara, ị rịgooro, mana mgbe ị na-apụ n'èzí, dịka n'ọgba ma ọ bụ ihe ọ bụla, na gị na otu Elves ma ọ bụ ihe gburu gị ga-alaghachi na ebe ahụ dị nchebe ma nwee ihe ọ bụla ọzọ ị nwere tupu ị merie ọgụ ahụ Onye isi na tupu ị pụọ n'èzí, mana ị gaghị enweta ọkwa ọhụrụ ma ọ bụ ihe na ee, nke ahụ na-agbakekwa ajọ omume.
Ihe bụ, naanị ihe ọjọọ dị na sistemụ weghachi bụ na ị tufuru ihe niile ị mere tupu ma ọ bụ ị weghachite faịlụ dị ka ị tufuru faịlụ egwuregwu anyị ebudatara ma ọ bụ ngwa na ihe ndị yiri ya, mana ọ bụghị ihe dị mma mgbe ị nwere akwụkwọ mmmlike, mgbe ị weghachite faịlụ ahụ ọ ka dị ebe ahụ n'ihi na ha anaghị agụ nke a mana agbanyeghị nke ahụ bụ maka isiokwu m ma nwee olile anya na isiokwu a nyeere gị aka ma nwee ekele maka ikiri ọnụego nkọwa ịdenye aha na ihe ọ bụla m ga-enwe isiokwu ndị ọzọ na m nwere olile anya ịhụ unu ebe ahụ kwa ekele maka ikiri na nke ahụ niile bụ maka taa bye
virtual ngwa didlogical
Olee otu m ga-esi tufuo Chrome exe bad image?
Hichapụ chrome.exema weghachite old_chrome.exekachrome.exe. Ugbu a lee ma ị nwere ike imeghe nke gịChrome. Ọ bụrụ na ị nwere ike dị ukwuu. Mana ọ bụrụ na ị hụ ugbu a, n'okpuru Ihe GoogleChrome, ị ga-ahụ ya n’egosi ụdị nke mbụ.29 agugu 2018
Hey ihe bụ ihe ọ bụ Lonnie Robinson n'isiokwu a Achọrọ m igosi gị otu esi tufuo faịlụ ntụpọ Google Chrome ahụ ezighi ezi.
Maara nke na-abịa mgbe ị na-agbalị ịkwụsị GoogleChrome ma ọ bụ mechie ihe nchọgharị Google Chrome gị. Ka o sina dị, m na-etinye desktọpụ m ugbu a, yabụ na anyị nwere ike chọọ ụzọ mkpirisi Google Chrome gị ebe ahụ, yabụ ka anyị pịa aka nri pịa ya wee pịa ihe niile dị mma ị ga-ahụ obere windo google chrome a mgbe windo windo na-apụta ebe a ebe ọ na-ekwu na anyị na-eme ọ? Achọghị m ịma nke ọma na anyị nwere ike ịmalite ebe ahụ, mana ka anyị bido, ị hụ ebe o kwuru na ọ na-amalite na ihe anyị ga-eme, anyị ga-ewere oke anyị, anyị ga-eme ka ọ pụta ìhè ihe anyị bụ ndị nọ n'elu rutere ruo mgbe anyị rutere na ngwa ị hụrụ otú m mere nke a ka anyị wee pịa nri ma anyị ga-edezi pịa ok iji mechie nke ahụ mgbe ahụ anyị ga-aga menu anyị ma ị ga-ahụ na m nwere ngwa m chọrọ ịnụ ya, mana gịnị ka ị chọrọ? Ọ bụrụ n'ịchọrọ pịa na ngwa ahụ, Ọ dị mma, wee pịa Chrome OK ka ị wee hụ ngwa ahụ wee jiri data onye ọrụ. Ugbu a, ị ga-eme nke a.
To ga-tufuo onye ọrụ data ahụ, ị ​​ga-edegharị ya ka anyị nweta ya nke ọma - pịa ma nyegharịa ya na anyị nwere ike gosi otu m ga-etinye abụọ mana agaghị m azọpụta ya mana ị kụrụ banye mgbe ịmechara njehie a ị na-ekwu na nke ahụ bụ ihe niile m nwere ike ịgwa gị na ọ ga-abụ maka gị Bibie ha Otu ihe ị chọrọ ime bụ tinye na onye ọrụ a onye ọrụ data na ị na-aga toggle ka mesie na ị pịa a ọrụ data onye na wee pịa na ndabara na ihe ị chọrọ bụ ị gafere ebe a wee chọọ ibe edokọbara, ugbu a ndokwa ibe m apụla ma ị na-ahụ ihe na ibe ntụpọ na ibe edokọbara & mgbe edokọbara m detuo ha ka anyị wee hazie ha, m naanị iji kuki dị ka ihe atụ andcooki es journal ị dị nnọọ pịa pịa ma ịchọrọ idetuo wee gaa na desktọpụ gị wee pịa mado facebook na tabokay ọzọ bụ ugbu a ma ọ bụrụ na m ga-emecha otu n'ime ndị a, m ga-enweta obere ihe rụrụ arụ ebe a mana ọnweghị ihe dị mma ugbu a, ị nwere ike mechie ihe nchọgharị ahụ ọzọ, jide n'aka na ọ bụ ot windo ya mechiri emechi na ihe nke ahụ ga - eme bụ nke ga - enyere folda ọhụrụ aka ka m gosi gị folda a nke ga - eme ka folda ọhụrụ rụọ ọrụ ma jiri ụgwọ data onye ọrụ gị gbaghara gị chrome na ngwa gị ị ga - ahụ data onye ọrụ ọzọ Ọ dị mma ị chọrọ ịbanye ebe a ị chọrọ ịlaghachi na ndabara ntọala laghachi ma were ndị a abụọ, ị nwere ike pịa wee jide njikwa-pịa ma ị chọrọ ka ị slide a ebe a, dịkwa mma ihe nke ahụ ga-eme ọ jụrụ ọ bụrụ na ị ji n'aka na ị chọrọ iji dochie ya? Azịza ya bụ ee na ihu ọma, ma ọ bụrụ na ị na ibe edokọbara ihe na Google Chrome ihe nke ahụ ga-eme bụ ime ka ibe edokọbara gị megharịa arụ. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla biko tinye n'okpuru isiokwu a na ihe ọ bụla nwere ndụmọdụ na nsogbu ndị ị nwere ike inwe n'ọdịnihu, ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwere ike ịnweta ndị otu na-akwụghị ụgwọ na nkuzi ihe ọmụmụ ahịa kwa ọnwa anyị wee nwee taabụ ebe ahụ na-egosi nweere onwe gị ka ị nwee ike pịa ya wee zụta ndị otu na - akwụghị ụgwọ ego, mgbe ahụ anyị nwere olile anya na ị ga - ewelite ndị otu anyị na - ebi ndụ na ndụ na isiokwu ndị a ga - enyere gị aka n’ajụjụ azụmahịa ịntanetị ndị ọzọ ị nyeere aka idozi ọtụtụ nsogbu. Daalụ nke ukwuu, nke ahụ bụ LonnieRobinson kwuru, sị: Mee ka onye kachasị ukwuu taa bụrụ onye kachasị mma
Kedu ka m ga esi edozi onyo ojoo ojoo?
Idozi1: Iwepụ & Reinstall mmemme
Pịa aka nri na mmalite, pịa Gbaa. Pịnye appwiz. cpl ma pịa OK. Pịa aka nri na ihe omume nke na-ebute njehie 0xc000012f “Ihe oyiyi jọgburu onwe ya”, Na pịa Iwepụ.
- Ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ anyị na-ezute ihe na-erughị ala na anyị chọrọ na anyị ahụtụbeghị ya site na mmalite.
Ma ị bụ onye a kpọsara ịchọkarị izu okè naanị ya hụrụ ya n'anya n'ihi na ebe a bụ ụfọdụ ihe ga-eme ka anya gị tụgharịa ntakịrị. (Ezigbo egwu) Lee foto a ma jụọ ajụjụ maka gịnị? Ihe onyonyo a na-atụgharị uche mere ka mmadụ nwee nsogbu na ntanetị mgbe mmadụ buru ụzọ tinye ya na July 2019, ndị mmadụ gbalịsiri ike ịchọpụta ihe kpatara ya ji dị oke anya, ị gaghị enwe ike ịkọwapụta azụ ndị Britain na nri ndị a -Ladens jiri nghọta kọwaa nri na-eri nri na peas kpodoro isi ala, o doro anya na mmadụ họọrọ iji Photoshop akwụkwọ nri ahụ karịa ịse foto ezigbo ozi ma ọ bụ na ha so na ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na peas na-ezighi ezi ezuru ime ka ọ ghara ịrịa ọrịa, lelee foto a ma tụọ egwu aha ọtụtụ ihe dị ka o kwere mee.
Na ileba anya mbu o yiri ka odi mfe, mana na nlezianya nke oma o nweghi ike ijide n'aka ihe otu n'ime ihe ndi ozo di na njirisi a. E wepụtara foto ahụ na-agbagwoju anya n'April 2019. Otu echiche bụ na ọ kwesịrị ịkọwapụta ahụmịhe nke ọrịa strok mgbe ihe niile ka maara nke ọma.
Enweghi ike ịmata nke ọma n'agbanyeghị nkọwa. Versiondị a na-edeghị ede kwuru na nke a bụ azịza ya. Kedu ihe ị hụrụ? Sandwiches bụ nri a ma ama n'oge ọ bụla n'ụbọchị.
Ma ọ bụ ezie na enwere mkparịta ụka mgbe niile banyere otu esi egbutu ha na nke ndoju kachasị mma. E nwere ụfọdụ ụkpụrụ mara mma gbasara nri. Agbanyeghị, nke a abụghị ikpe na otu n'ime ha.
PB na J nwere ike ịbụ nchikota mmeri, mana echiche nke mkpuchi mkpuchi na ebe achicha akọrọ kwesịrị ịbụ ihe zuru oke iji mee ka akpụkpọ anụ onye ọ bụla na-awagharị - Anaghị m eche na achịcha bụ njuju ma na-arụzi soseji n'ihi na mpụga ga-emeri. Ma ọ dịkarịa ala, o yiri afọ ojuju na onwe ya. Kedu ihe kpatara na ndị mmadụ enweghị ike iri nri nkịtị? Might nwere ike ịhụ ihe na-adọrọ adọrọ nke steepụ a na-abịa n'ihu.
Ma ọ bụ ezie na ọ dị oke mma ile anya, ụwa a ga-abụ nro zuru oke maka ọtụtụ. Maka ndị na-ebido ebido, ụlọ a na-etinye apịtị apịtị. Ndi ezigbo anya maka akpịrị anya.
Can nwere ike iche n'echiche ịnwale ya? na-ahapụ ụlọ ngwa ngwa, ma ọ bụ ka njọ, na-abịa n'ụlọ ma banye na mmanya na-egbu ya? Ọ bụghị atụmatụ azụmaahịa niile na-arụ dị ka eburu n'uche, echeghị m na akara baajị a na-enweta ozi n'ofe yana ndị okike ya nwere olileanya na ọ ga-eme. Mba, ị nweghị aneurysm. Baajị nke na-ekwu eme ya n'ụzọ dị iche na ntụzi dị iche iche.
Ọ bụ nnọọ nzuzu. Mgbe ụfọdụ dị iche iche anaghị adịkarị mma. Mgbe ụfọdụ, ọ na-akwụ ụgwọ ịhapụ ihe a na-emekarị, karịchaa ma a bịa n'ihe oriri.
Na-anwale ihe ekpomeekpo ohuru. Ọrụ nwere ike ịba uru mgbe ị hụrụ nchikota mmeri ọhụrụ, mana onye ọ bụla kpebiri inye ụdị egwu hotdoga ahụ dị egwu kwesịrị ịkwanye maka mpụ megide ụmụ mmadụ. Echiche nke ụdị mgbasa ozi nke nri a bụ Cheedị n'echiche siri ike ịgha akwa iji chọpụta na enweghị nkochi ime akwa ọ bụla.
Nke a bụ ihe mere na nwanyị Japanese nke chọpụtara ihe nzuzu na-enweghị atụ na Disemba 2016. O doro anya na nke a bụ ihe a na-ahụkarị na mmepụta Ag - ị na-adakarịghị ịdepụta ndepụta nkochi ime akwa. A na-eji akwa obere anụ arụ kee akwa site na itinye ọkụkọ n’elu ọkụkọ, na-ebutezi akwa nke a na-akpọkarị fart egg.
Ime ya n'ime ụlọ na-ama ụma ada usoro dị njọ iji mekpaa onye ọ bụla na-abata n'ime ụlọ. Ime ụlọ ịwụ a bụ ọkwa ahụ. O doro anya na obi na-adị ụlọ ahụ abụghị ihe ngọpụ maka nkedo taabụ na enyo angular nke na-eme ka ọ dị ka ihe niile ọ na-akụda.
Onye ọ bụla ga-enwe obi ịmị mmiri n'ebe ahụ ma tinye ya na mmanya na-egbu nwere ike ịpụta ọdachi. Ọ dịghị onye na-enwe mmasị na-eche onwe ya dịka atụrụ na-eso igwe mmadụ na ndụ. Mana onye ọ bụla nke na-eme ihe dịka Ya bụ ụzọ akpachapụghị anya na ọ ga-agba arụkwaghịm.
Agbanye m na-afụ ụfụ naanị na ị na-elele foto a, na-eche n'echiche ole a na-ata ata na nnukwu oke aru. Onye a Bradley na-eri kats dị ka nke a ma ọ bụ njọ dị ka anụ ọhịa a. E nwere ụfọdụ ụlọ ahịa nwere ụkpụrụ ọma ụfọdụ, ma ọ bụ ezie na ọ bụghị mmadụ niile na-akpa àgwà kwekọrọ na nke a, nwanyị a gafere akara maka ịzụ ahịa ahịa niile, ee e, mba.
Nwanyị a na-eji achịcha atọ zuru oke na ikpere ikpere ya na-eme nchọgharị na shelf. Ọ dị onye na-ewere nhọrọ achịcha n'ezie? Ntu art na-esi n'aka nke ụbọchị ndị a. Ọ na - eche ụdị ụzọ ọhụụ ọ bụla iji chọọ ya mma.
Ma àgwà ọhụrụ a pụrụ iche adịghị mfe maka okwu. Oge ọ bụla osikapa na-arapara n'otu n'otu yiri ka ọ na-abụ nnukwu nsogbu maka ọgbaghara a, na-atụ anya na mmadụ weere ohere ịsị osikapa. There na-abịa ebe a Igwe ikuku nke agbata obi na Florida zuru iji kpalite OCD nke mmadụ.
O nwere ike iyi ka ọ dị onye na-egwu egwu na-egwu Sims, mana ebumnuche ojii a nke ụlọ na ụlọ ndị megidere n'ụzọ ahụ na ebumnuche. O nwere ike ịbụ na e mere atụmatụ dịka nhazi oge mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ-ọdịda anyanwụ tupu ị kwado mpaghara ndị agbata obi n'akụkụ ụsọ mmiri. Kama, Inye Ekele bụ oge zuru oke maka ezi na ụlọ ịkọkọ ọnụ ma nwee ezigbo oge.
Mana ọ bụrụ na enwere otu ụzọ iji mebie nzukọ a, ọ bụ nke a, onye ọ bụla were foto a furu efu onye ọ hụrụ n'anya ụbọchị ahụ Akpụkpọ ụkwụ bụ isiokwu na-ese okwu maka ụfọdụ ndị mana echere m na anyị niile kwenyere na nkedo ndị ahụ na-adị mma jọgburu onwe ha Gburugburu gị abụọ akpụ nke ígwè siri ike dọkpụrụ site na ụkwụ gị. Ọ dị ka ọnọdụ dị mma maka otu ụbọchị n'ụsọ osimiri. Echere m na enwere ike ịbelata mkpịsị ụkwụ gị ụkwụ.
Imirikiti ụmụaka na ndị okenye na-ahụ n'anya na-atọ ụtọ ga-enwe mmasị ịnwe slide na azụ nke aka ha, mana ekwenyeghị m nke ọma na ụdị a dị n'etiti nkpoda dị egwu, ọkpọkọ siri ike nke ubube na njem nke abụọ. Nke ahụ ga-agbapụ gị n'ime mmiri na oke ọsọ. Nke a dị ka ihe eserese na-enweghị mgbagha dị ka onye kwupụtara na ọ na-achọkarị izu oke, ọbụlagodi obere ihe na-enweghị ebe ọ ga-abụ ihe na-akụda mmụọ, mana onye nwe ụlọ erutela oke ịhapụ uwe m chere.
Onye ọ bụla nke mepụtara ogwe njikwa a achọghị ka onye ọ bụla pụọ ​​na igwe mbuli - ma ọ dịkarịa ala n'ala aka nri Mkpọchi na ihe a dị ka akara bingo karịa usoro nhazi nke usoro. Na maka ọgba aghara niile ọ na - akpata, ọ nwere ike ọ bara uru ịnara steepụ kama. Were ya na ị gara n’ụlọ mmadụ na nke mbụ ya ma chọpụta ihe a.
Ọ bụrụ na ị gbagooro iji ụlọ ịsa ahụ mee ka ndị mmadụ na-aga ije na-abụghị akụkụ, mana m na-eche na ọ ga-amasị anyị ịmata nke a n'ụkwụ ụkwụ gị. Ha nwere ụzọ ha. Ihe ncheta kasịnụ na ụwa enweghị obi iru ala ile anya, ha bụ ọnyà ndị njem nleta siri ike na ọtụtụ nde mmadụ na-aga mba ọzọ iji were foto mara mma kwa afọ.
Ma ị nwere ike iche n'echiche ịme ya n'elu ụlọ elu Eiffel iji hụ nke a. Onye njem nleta a na-adịghị mma bụ obere oge iji hụ onyinyo nke ụlọ elu ahụ n'ụzọ zuru oke na ụgbọala si Jardinssu trocasero gafee akwa ahụ. Mara ụlọikwuu ma gbalịa ọzọ echi.
Ọ bụrụ na foto ikpeazụ ezughị iji kpalite Nsogbu Na-emerụ Ahụ, wee nwalee nke a maka nha. Ọnụ ụzọ Walkie a dị na North London emeela ka ndị mmadụ iwe na ịntanetị na-enweghị ike ịghọta. Esi esi ebe pụọ, ọnụ ụzọ square ahụ na-elegharị anya n'okporo ámá.
Eleghị anya, ihe kacha akpasu ya iwe bụ na onye na-ekesa akwụkwọ ozi jiri ndidi jiri aka ya nweta akwụkwọ ozi site na igbe akwụkwọ ozi. Anyị niile emehiela nke ilo otu iko mmanya ọhụụ ọhụrụ mgbe anyị na-ete ikikere ezé n'oge ụfọdụ na ndụ anyị. Mana ọbụna nchikota a enweghị ihe ọ bụ ma e jiri ya tụnyere onye omekome a.
Ọ na-ewe ezigbo psychopath iji chụọ kuki na-enweghị isi n'ụzọ dị egwu. Ọ bụrụ n’ị hụghị nsogbu ebe a, yabụ na ị ga-eme otu. Enwere ohere maka ntakịrị imepụta ihe na ndụ kwa ụbọchị.
Ma ọ bụrụ na ị ga-eme ụdị ihe ahụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịkwanye ya ntakịrị. N'ezie, ọ ga-ewe ụfọdụ onyinye iji hazie ntutu nke gị ka ọ bụrụ ọrụ aka. Mana anya ndi ahu na-elegide na nkpuru obi m.
Ọ bụrụ na nri anaghị atọ gị ụtọ mgbe ahụ ị nwere ike ịnwale ndụdụ a maka ihe ịga nke ọma na-ekwe nkwa. Ma eleghị anya, ọ bụ nke a sitere na ntụpọ nrụpụta dị mfe, ma ọ bụ ebe mmadụ bụ ngwaọrụ ịta ahụhụ ọbara maka onye ọ bụla na-enwe olileanya ịnweta nri siri ike n'ime ahụ ha. Ihe na-akpali iche n'echiche otu o gha adi nma iji osisi a.
Ndị mmadụ ga-agba ọsọ ihe ọ bụla ugbu a, mana ebe ọ bụ na nke a dị ezigbo mkpa echeghị m na nke a ga-abụ ụzọ iji gbaghaa ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ. Mana ọ bụ kwusi nke bara ezigbo uru na ụtọ ncha na ire ụtọ n'ọnụ gị. Ọbụna ma ọ bụrụ naanị maka nke abụọ.
Na afọ nke njikọta Bluetooth, ekweisi ekwekọ na-arịwanye elu, mana ngwọta a dị ka ihe na-adịghị mma karịa amamihe. Nsogbu nke na-agbazi eriri ndị ahụ site na ịkpọpu akụkụ nke ọ bụla yiri ka ọ bụ ihe na-akpasu iwe, mana chee na ị ga-apụ na laptọọpụ gị wee chefuo na ha ka na-agbanye. Ee e, foto a dị na Photoshop na ihe ijuanya, ọ bụghị nchịkọta nnukwu lumps nke anụ uhie uhie? A na-eme arịa ụlọ a n'èzí maka marble, quartz dị elu, bụ nke a na-ehicha ma ree.
N'ezie, ndị na-achịkọta ihe na China na-eme nzuzu banyere anụ anụ ndị a, na ụdị kachasị mma nke yiri anụ ezi nwere ike ree ọtụtụ puku. Yabụ ebe ịchụàjà mgbasa ozi a enweghị atụ. Ube oyibo bụ ọkacha mmasị na hipsters na influencers dị njikere snap zuru oke hashtag brunch foto, mana enwere ihe dị na ube oyibo a na-edozi nke doro anya na echiche ahụ adịghị.
Nke a na-akpụ afụkọ bụ ọrụ nke ndị na-ese ihe. Dan Barrow, Wellman, onye ọkachamara ya na-eme ka ihe ndị na-adị kwa ụbọchị bụrụ ihe na-adịghị mma dị ka o kwere mee. Na foto ị na - enweghị ike ilepụ anya.
Nnọọ na mkpọchi okporo ụzọ adịghị mma na ọtụtụ akụkọ, mana ọ nwere ike ịbụ ihe jọgburu onwe ya karịa okporo ụzọ okporo ụzọ 25 dị na China nke bụ naanị mmadụ anọ ka anyị gafere ụlọ ndozi, otu ụgbọ mmiri jidere nke ahụ na-enweghị nsogbu okporo ụzọ na 2015, mgbe ọtụtụ puku mmadụ gasịrị nke ndị ezumike China rapaara na ụzọ ha laghachi Beijing mgbe ezumike mba ha gasịrị na n'August 2010, ihe yiri ya mere nke mere izu abụọ zuru ezu maka ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala. Ha pụtara ugbo ala ha, naanị otu kilomita otu ụbọchị, ma na-akọ na ha rapaara na ndụ ruo ụbọchị ise. Onwere ndị mere egwuregwu ya nke ọma ma enwere ndị na-achọ itinye ihe egwu.
Naanị ile foto a zuru ezu iji kpalite ụjọ. Ahapụ naanị ịnya ụgbọ ala ahụ na iko juru nke cok d ọsọ ịgba na ọ gafere egwuregwu. Onye ọ bụla nwere obere nsogbu na-agwụ ike ga-enwe nsogbu ịrụ ọrụ mgbe ọ chọtara nke a na ala ụlọ ịsa ahụ.
Ọ na-ewe iwe ngwa ngwa. Faịlị ndị na-efu efu bụkwa ezigbo isi mmalite nke ihe omimi. Ọ bụ mgbe niile ka nke a ma ọ bụ ihe mere eme? Chọta otu agba agba nwere ike ịbụ naanị ihe ga-eme maka ọnọdụ a na-adịghị mma.
Routezọ a na-agba ọsọ nwere ike ọ gaghị iyi ihe pụrụ iche, mana lee nọmba ahụ ma ị ga - ahụ ihe kpatara nke a ji bụrụ ihe na - adịghị mma ile anya. Ihe kacha njọ. A ga m achọpụta na ọnụọgụgụ atọ bụ isi n'ala, ọ nweghị ike ihu ya.
Ugbu a, ọtụtụ ndị mmadụ na-asọpụrụ kpakpando kachasị amasị ha na ọ bụghị ihe ọhụrụ maka ụmụaka iburu ụbọchị ọmụmụ ha n'uche ha. Ma achicha Justin Beaver a abụghị n'ezie nwa-enyi na enyi. Ọdịdị ahụ nwere ike ịbụ eziokwu ugbu a, mana m na-eche ihe ụdị anụ ọhịa a jọgburu onwe ya ga-adị ka esiri ya.
Ọ bụrụ na e nwere ụzọ iji mee ka mmadụ nwee obi iru ala na ụbọchị ọmụmụ ha, E wezụga ime ka onye ọbụ abụ kachasị amasị ha n’anụ ahụ. Ọ na-enye ha achicha dị ka nke a. Ọbụna ma ọ bụrụ na ozi iwe a ghọrọ ihe egwuregwu na-adịghị emerụ ahụ, a na-egbusi nkwenye dị ukwuu maka ọnwụ maka ịkpachapụ anya na nsị ọ bụla.
Enwere ụfọdụ ihe dị oke egwu. Nweghị ike ilepụ anya. Asụsụ nwanyị a dị egwu bụ otu n'ime ha.
Nnukwu mgbawa ya nwere ike ịbụ nsonaazụ nke ajọ ihe ọghọm, mana o doro anya na ọrịa a na-akpata mkpụrụ ndụ ihe nketa bụ ihe a na-ahụkarị na ndị ọkụ azụ na-asụ asụsụ, belụsọ na ọ bụ, sịnụ, enweghị mgbu zuru oke ma na-achọ obere nchachacha, mana ọ ka na-eme ihere ịhụ onye a ihe curl gị na mkpịsị ụkwụ ọtụtụ. Mee ka m mara na nkwupụta (outro music)
Kedu otu m ga esi edozi onyomehie nke OneDrive?
Olee otúIdozi OneDrive.exe-Ọjọọ Ọjọọna SyncEngine. DLL faịlụ.
IwepụOneDrivesite na Windows. Mepee Iwu Kwuru dị ka Onye nchịkwa. Iji mee nke ahụ: ...
Budata na Re-WụnyeOneDrivenke Microsoft. Download kacha ọhụrụ mbipute nkeOneDrive. Mepee faịlụ ebudatara (OneDriveSetip).exe) ma wụnyeOneDrivena kọmputa gị.
njehie a na-emekarị emee mgbe gwụ windo agbachitere ngwa. naanị ị ga-agbanye windo na-agbachitere ma melite windo na-agbachitere wee nyochaa otu oge na windo 10 njehie abụghịzi synaptics.exe badimage ebe a kọmputa m agbanyụrịrị windo na-agbachitere ma ugbu a, m ga-agbanye windo na-agbachitere windo ọzọ gịnị kpatara m ma ọ bụ ụfọdụ n'ime m ọrụ gbanyụọ windo agbachitere n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụ software na kọmputa m ma Windows Defender chere na ọ bụ nje na-ejikarị delete ya dị ka na? Achọrọ m ịgbanyụ Windows Defender Na mbụ m jiri sọftụwia Windows Defender iji gbanyụọ Windows Defender, ma ugbu a, m na-alaghachikwa na Windows Defender software iji mepee Windows Defender, mgbe m gbanye Windows Defender azụ, ị nwere ike ịmalitegharịa kọmputa gị ma ọ bụ ịnwere ike ichere otu nkeji ma ọ bụ abụọ maka Windows Defender iji megharịa ọrụ, na oge a pịa Lelee maka Mmelite iji melite Windows Defender na nsụgharị ọhụrụ, Windows Defender r melite usoro zuru ezu Ugbu a gaa na nyocha ngwa ngwa nke kọmputa gị niile ijide n'aka na n'oge nyocha ahụ, ozugbo ịnwere ike imeghe folda ahụ na njehie synaptics.exe, ị kwesịrị ịlele ọzọ ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro atọ, nke mere na onyonyo agaghịzị ahụ synaptics.exe ozi onyonyo ọjọọ, yabụ ị nwere ike ọ gaghị ikwugharị i erroromi njehie synaptics.exe na-akpata onyinyo ọjọọ n'ihi na ị na-eji laptọọpụ draịva kama USB mbanye ịchekwa sọftụwia ma soro gị buru ya mgbe ụfọdụ iji jikọọ kọmputa ndị ọzọ.
Nwekwara ike ịchọta folda ahụ na ozi njehie na mbadamba Synaptics .exe thatimage ka ihichapụ folda a na-edozikwa njehie synaptics.exe ọjọọ ma ọ bụghị ezigbo mma n'ihi na ọ bụrụ na ihichapụ ya data nchekwa gị ga-efunahụ ngwanrọ gị niile.
Ọ dị mma ịmechara kọmputa m, ana m enyocha ya ugboro abụọ, anaghịzi m ahụ ozi Synaptics. exe bad image otú ahụ ka m ga-akwụsị ịgụ isiokwu a ma ọ bụrụ na kọmputa gị na e scanned ọzọ na ị ka na-synaptics.exbad image ozi, ị kwesịrị ị na rescan a di na nwunye nke ugboro ma ọ bụrụ na ị chebe s ọtụtụ ugboro ma nsogbu ka na-adịghị ofu mgbe ị kwesịrị ị na nweta nkwalite na ụdị kacha ọhụrụ nke Windows 10 mgbe ị na-akwalite ụdị nke Windows 10 kachasị ọhụrụ.
Nke a pụtara na windo gị na-agbachitere bụ ụdị ahụ ma nwee ihe oyiyi mwepụ ihe oyiyi niile dị njọ synaptics.exe, mgbe m dekọtara isiokwu a kọmputa m na-eji windo 10 x64 mbipute 1903 ụgwọ 18362.1082okay, ugbu a, m na-emechi windo na-agbachitere ma mepee ya ya na folda iji hụ ma synaptics.exe ozi onyonyo ọjọọ ka na-egosi data m na draịva d ga-adọpụta ya ma tinye ya ọzọ incheckyou